Burco: Teleefan Bilaash Ah Oo La Hirgeliyay Si Loogu Gurmado Bukaannada Shubanka
Photo | Gaari Gurmad Degdeg ah/ Burco/ Sidiiq Khalaf/RadioErgo
Xarunta daweynta cudurka shubanka ee burco ayaa laga hirgeliyay teleefan bilaash ah, si loogu soo wargeliyo kiisaska shubanka iyo gaadiidka gurmadka degdegga ah ee bukaannada lagu daabulo.
Xassan Yuusuf Halac, waa 55 jir dhalay 3 gabdhood, waxa uu ku noolyahay xaafadda Seyladda ee magaalada Burco. Gabarta carruurtiisa ugu weyn oo 14 jir ah ayuu shuban biyoodku ku dhacay xilli casir liiq ah. waxa uu la xiriiray nambarka lacag la’aanta ah ee gurmadka degdegga ah ee yaalla xarunta xannaanada dadka uu shubanku ku dhaco. 30 daqiiqo kadib waxaa soo gaaray gaadiidka gurmadka degdegga ah ee u gaarka ah xaruntan.
Waxa uu sheegay in uusan awoodin lacagta kirada gaariga uu ku geyn lahaa isbitaalka oo qiyaastii 4Km u jira gurigiisa, oo ah $10, iyadoo intaas ay dheer tahay in gawaarida qaar aysan ogoleyn in ay daabulaan dadka uu shubanku soo rito sababo dhanka nadaafadda la xiriira.
“Dad badan ayaa xaafadda ugu dhintay gaadiid la’aan gabadheyda waxa ay shubmeysay nus-saac markii aan xarunta teleefanka ka wacay intii aysan tabar dhigin” ayuu Xassan Radio Ergo u sheegay.
Wasaaradda caafimaadka Somaliland iyo shirkadda teleefannada ee Telesom ayaa iska kaashaday hirgelinta teleefan bilaash ah oo u gaar ah kiisaska shubanka, kuna xiran xarunta xanaanada dadka uu shubanka soo ridanayo ee magaalada Burco. Waxaa sidoo kale xarunta lagu diyaariyay gaari oo ah kuwa gurmadka degdegga ah oo bukaannada guryahooda ka soo qaada.
Adna Aadan oo ka mida 20 kalkaaliye oo si tabarucaad ah uga shaqeeya qeybtaan teleefannada ayaa Raadiyaha Ergo u sheegtay in ay gaadiikan ay ku dhex diyaarsan tahay daawo, faleebooyin, iyo cabitaanka fuuq celinta, taas oo ka badbaadineysa in bukaanku uu waddada ku sii fuuq baxo. Sidoo kale howl wadeenanda ayaa buufinaya guriga ay bukaanka ka soo qaadaan si looga hortago inuu cudurku sii faafo.
“Dadka ugu badan waxa ay dhinteen inta aysan isbitaalka soo gaarin, marka si waqtigaas u dhaxeeyay guryaha iyo isbitaallada loo soo gaabiyo, gaari kasta waxaa la socda howladeennada caafimaad oo lalama sugayo inta isbitaalka lagama soo gaaro” ayey Adna tiri
Shantii maalin ee la soo dhaafay ee uu adeeggaan shaqeynayay waxa ay xaruntu qabatay 350 bukaan oo la seexiyay oo dhamaantood soo maray nidaamka cusub ee teleefanka kadibna guryahooda looga soo qaaday gaadiidka gurmadka degdegga ah. Tirada dhimashada ayaa hoos u dhacday in kabadan kala bar marka la barbardhgo inta uusan adeeggan billaaban. 6 qof ayaa dhimatay 5tii cisho ee u dambeysay, halka 5tii cisho ee ka horeysay ay 11 qof shubanka ugu dhinteen Burco, sida ay Raadiyaha Ergo u sheegtay Agaasimaha Machadka Caafimaadka Burco Faadumo Cismaan Axmed.
“maanta 89 qof ayaan qabannay, halka shalay aan qabannay 120 qof, halkaas ayaad ka garan kartaa in aad ka gudubnay qaabkii hore ee habqanka ahaa ee uu qof walba iskiis isku xilqaamayay”
Olole wacyi gelineed oo todobaad qaatay ayaa dadka magaalada Burco waxaa lagu ogeysiinyay teleefanka cusub ee u gaarka ah ka jawaabidda kiisaska shubanka iyada oo gawaari codbaahiyeyaal lagu xiray dadka loogu sheegayay nambarka cusub iyo adeegyada uu qabanayo.
Magaalada Burco oo shubanku ka dillaacay billowgii April waxa uu galaaftay 40 qof, halka la diiwaan geliyay 35,000 oo qof in uu ku dhacay. Dadka iminka jiifa machadka caafimaadka Burco oo ah halka kaliya ee loo asteeyay in bukaannada uu xanuunkan ku dhaco lagu daweeyo ayaa hadda waxaa jiifa 86 qof sida ay inoo xaqiijisay agaasimaha Machadka Faadumo Cismaan Axmed.
Somaliland ayaa todobaadkii hore ku dhawaaqday in ay xiran yihiin dhammaan xarumaha wax lagu barto ee magaalada iyo in koontaroollada la geeyo shaqaale caafimaad oo buufiya dadka baxaya iyo kuwa soo galaya Burco, si looga hortago inuu shubanku faafin arrintan ayaana looga dan lahaa in lagu xakameeyo shuban magaaladaas ku faafaya labadii bilood ee u dambeysay.